June 26, 2019 - Online Media
‘ह्याङ्ला रिमठिम’ बृहत बनभोज कार्यक्रमको आयोजना
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: June 26, 2019 (10 Month)
दक्षिण कोरिया /शौल/ तामाङ संघ दक्षिण कोरिया र तामाङ समाज ख्यङसाङनाम्दोले संयुक्त ‘ह्याङ्ला रिमठिम’ बृहत बनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । कोरियामा रहेको तामाङ समुदायको एकतालाई लक्षित गरी कार्यक्रम आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको हो । कार्यक्रम ‘छुङनाम खुमसान गुन छुवु म्यान सङदान’को सथेनसान ड्रिम रिसोर्टमाजुमा जुलाई २७ र २८ (शनिबार, आइतबार) हुनेछ । उक्त रिसोर्टमा ५००-७०० जनाको क्षमता भएको हल, शान्त र रमणिय वातावरण, पैदल यात्रा, वाटर पार्क सहितको सुविधाहरु रहेको छ । कार्यक्रममा साँस्कृतिक तथा मौलिक खानाको व्यवस्था, डम्फु नाचको प्रदर्शन हुने अध्यक्ष मेघ वाईवाले बताएका छन् । सहभागी
Entertainment, International, News, Religious Comments are Off
कोरियामा कोरोना संक्रमणले एक जनाको ज्यान लियो, सुरक्षित रहन अपिल
सउल नेपाल गुम्बाद्वारा मार्च १ आयोजित बृहत ल्होसार ल्हाब्सोल कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा
काभ्रे सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाको बार्षिक साधारणसभा भब्यरुपमा सम्पन्न
महान दार्शनिक प्लेटोको भनाईहरु शेयर गरौ “जसले सिकीमात्रै रहन्छ तर केहि गर्दैन,त्यस्तो व्यक्तिले जोत्छ मात्रै”
कास्की परिवार दक्षिण कोरियाले तथ्यांक संकलन गर्दै
प्लेटोको जन्म एथेन्सको नजिकै ईजिना नामक द्विपमा भएको थियो । उनको परिवार एक सामन्त वर्गको थियो । उनका पिता अरिस्टोन र माता पेरिक्टोन इतिहासका प्रसिद्ध कुलिन नागरिक हुन् । ४०४ ...
समाजवादमा पुग्ने कसरी ?
युवराज ज्ञवाली कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था त्यहाँको ठोस विशेषतामा आधारित हुन्छ । नेपालको संविधानमा मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यो संविधान, ...
लिडर कसरी बन्ने ? लिडरमा हुनुपर्ने १३ योग्यता पढ्नुहोस् –
लिडर बन्नको लागि तपाई निर्वाचित अधिकारी वा मुख्य कार्यकारी व्यक्ति हुनुपर्दैन । तपाइँ परिवारको लिडर बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै जिन्दगीको या त कुनै व्यक्तिको । लिडर त्यस्तो व्यक्ति हो जो ...
नेपाल तामाङ कलाकार संघ दक्षिण कोरियाको अध्यक्षमा गायक युनिक दोङ
शौल। दक्षिण कोरियामा नेपाल तामाङ कलाकार संघ गठन गरिएको छ । संघमा गायक युनिक दोङकाे अध्यक्षतामा ९ जनाको कार्य समिती गठन पनि गरेेेेको छ । ...
काेरियामा साेनाम ल्होछारकाे राैनक, कार्यक्रमकाे भव्य तयारी
दक्षिण काेरिया/ शाैल/ दक्षिण काेरियामा साेनाम ल्होछारकाे राैनक छाएकाे छ । तामाङ संघ दक्षिण काेरियाले जनवरी २४ सलनालको पहिलो दिन कार्यक्रमकाे ...
नर्वेमा युरोपको पहिलो अन्डर वाटर रेस्टुराँसञ्चालनमा आएको छ । एक सय जना मानिसले एकसाथ लन्च वा डिनर गर्न सक्ने यो रेस्टुराँमा ४० जना मानिसले ...
नताशा ब्लोनले दोस्रो सगरमाथा म्युजिक अवार्डमा बर्षकै उत्कृष्ट नव मोडेलको उपाधि हात पारेकी छन् । मंगोलियन अनुहारकी धनी नताशा मकवानपुर राक्सिराङकरो बासिन्दा हुन् । तिमी हॉसेको म्युजिक भीडियोबाट अवार्ड हात पारेकी उनी अहिले काठमाण्डौं बसेर अध्ययन संगै मोडलिङ्गमा सक्रिय रहेकी छिन् । मोडलिङ्ग सगैं नृत्यमा पोख्त उनी हाल काठमाण्डौंमा पनि नृत्यको कक्षा लिइरहेकी छिन् । हरेक प्रकारका गीतमा नृत्य गर्नै खुबी उनमा रहेको छ । गायक प्रकाश दोङ्गको सेलो गितबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनले अहिले सम्म ४–५ ओटा म्युजिक भिडियो आफनो अभिनय कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् । लामो समय
बर्षकै उत्कृष्ट नव मोडेलको उपाधि नताशा ब्लोन लाई
दक्षिण कोरिया/ शौल/ दक्षिण कोरियाबाट सोनाम दोङबा ह्योल्मोको पर्देशी छोरी बोलको मन छुने गित सार्वजनिक भएका छन् । पर्देशमा रहेकाहरुले गाऊँ घर र स्वदेशलाई सम्झना गरेको कथामा आधारित भिडियो सहित बजारमा आएको हो । कोरियामा कडा परिश्रम गरेर पनि सांगितिक यात्रा अगाडी बढाएकी गायक सोनाम बताउछिन । उनको यो गित असुसेन लामाको शब्द र संगित रहेको छ । भिडियोमा श्याम राई , डोमा ह्योल्मो र वर्षा थिङले अभिनय गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर रहेकी सोनाम कोरियामा सामाजिक क्षेत्रमा पनि योगदान गर्दै आईरहेकि छिन । उनी Rj समेत रहेको छ
कोरियाबाट पर्देशी छोरी सोनामको मन छुने गित
🇳🇵🇳🇵🇳🇵 मिस नेपाल शृंखला खतिवडाले मिस वर्ल्डको ताजलाई आफ्नो जन्मभुमीमा स्वागत गर्न हामी अत्ति उत्साहित छौ भनेर भोट गर्न अपील गरेकी छिन । मिस वर्ल्डको प्रतियोगिता चिनमा हुदैछ । ईतिहासमा नेपालको नयॉ नाम लेखाउन उनले आतुर रहेको सामाजिक संजालमा उद्घोष गरेकी छिन । नेपालकी शृंखला खतिवडाले अहिले विश्वको ध्यान आफु तिर खिचिरहेकी छिन । ईन्जिनियरिंकी विद्यार्थी मिस नेपाल बनेकी खतिवडा नेपाल आईडल- २०१८ भएकी थिईन । हाल चिनमा भईरहेको मिस वर्ल्डमा भाग लिन गएकी शृंखलाको पहिलो भिडियोले नै संसार आफु तर्फ केन्द्रित गरेको हो । २२ बर्षिय खतिवडा विश्वको १२०
🇳🇵मिस नेपाल शृंखला खतिवडाको भोट गर्न अपील “मिस वर्ल्डको ताजलाई नेपाल ल्याउन आतुर छु”
काठमाडौ/ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती पाँच महिने कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । जुन ७ क्लिप र १ भिडियोमा प्रष्ट पारिएको ।नेकपाका युवा नेता महेस बस्नेत र बिपक्षि कांग्रेस नेता महेन्द्र राहत संगको बहस तल सुन्न सकिन्छ । क्लिपहरु:- १) २) ३) ४) ५) ६) ७) भिडियो:-
ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती पाँच महिने कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक
किशोर नियोग/दक्षिण कोरिया/ बिदेशबाट २०७२ साल बैशाख १२ गते आएको महा भूकम्पलाई गायक सुर्य रुम्बाले सारा नेपालीहरुको नाममा सम्झना गरेको छ । ईतिहास मै ठुलो कम्पनमा आएको भूकम्पले हजारौको ज्यान लियो भने लाखौंलाई घरबार विहीन बनाएको थियो । गायक रुम्बाले Luck एल्बममा समाबेस गरेको “एक युगमा एक दिन” बोलको गीतबाट बैशाख १२ को महा भूकम्पलाई कालो दिनको दस्तावेजको रुपमा उतारेको छ । गायक रुम्बाको जन्म बैशाख २६ पदमपाेखरी टुटेपानी हेटाैंडा १३ मकवानपुरमा भएको हो । उनले अध्ययनलाई S.L.C पछि ललितकला क्याम्पस भाेटाहिटी काठमाडौंबाट शास्त्रीय संगीतमा स्नातक (B.mus) गरेर पहिलाे
बिदेशबाट गायक रुम्बाले बैशाख १२ सम्झिए- एक युगमा एक दिन (कोलो दिनको
एकपछि अर्को चमत्कार गर्दै ओली || विदेशी सरकार लाई यसरि घुडा टेकाउदैछन ||सेयर गर्नै पर्ने भिडियो
“आमा भन्ने शब्दनै काफी छ” दर्दानाक भिडियो आमा न हुने लाई रुवाने छ
माया आँखै गाजले\_Best Dancing Song
Karishma Dhakal पेम प्रस्ताव आउँछ्,म स्विकार गर्दिना
Kishor Kumar Blon (Niyog)
Hetauda, Nepal / currently:- South korea
Our Other Network:
© 2020: Online Media All Rights Reserved. Designed by: GOJI Solution